"Ralf Rangnick Waa Beenaale... Marnaba Ma Diidin Inaan Ciyaaro" - Xiddig Ka Tirsan Manchester United Oo Dhulka La Dhacay Tababare Rangnick - GOOL24.NET
“Ralf Rangnick Waa Beenaale… Marnaba Ma Diidin Inaan Ciyaaro” – Xiddig Ka Tirsan Manchester United Oo Dhulka La Dhacay Tababare Rangnick
Manchester United ayay xaaladdeedu sii xumaatay kaddib barbarrihii niyad-jabka lahaa ee ay xalay la galeen Aston Villa oo ka daba keentay laba gool 13kii daqiiqadood ee ugu dambeeyey ciyaarta.
Ralf Rangnick ayaa lagu tilmaamay beenaale kaddib markii ay ciyaartu soo dhamaatay. Tababaraha Jarmalka ayaa warbaahinta u sheegay in weeraryahanka reer France ee Anthony Martial uu iska diiday inuu ciyaaro kulankan, xilli uu doonayay inuu kusoo darsado liiska kulanka.
Sababta ayuu Rangnick ku sheegay in laacibkani uu doonayo in la fasaxo, taas darteedna uu iskaga diiday inuu qayb ka noqdo kulanka.
“Haa, ma aanu doonayn inuu qayb ka noqdo kooxda. Wuu ku jiri lahaa liiska kooxda sida caadiga ah laakiin isaga ayaan doonayn, waana taa sababta aanu noola soo safrin shalay.” Ayuu yidhi Rangnick oo xalay la hadlayay warbaahinta.
Waxyar kaddib waxa soo hadlay Anthony Martiial oo sheegay in waxa uu tabababaruhu warbaahinta u sheegay, in aanay waxba ka jirin.
Qoraal uu degdeg ugaga falceliyey hadalka tababaraha oo uu ku daabacay bartiisa bulshada ee Instagram ayuu Martial ku yidhi: “Waligay ma diidayo in aan u ciyaaro Manchester United. Toddoba sannadood ayaan halkan joogaa oo marnaba ixtiraam-darro ma muujin, waligayna uma muujinayo ixtiraam-darro kooxda iyo taageereyaasha.”
Manchester United oo ay dhaawacyo kaga maqnaayeen Marcus Rashford iyo Cristiano Ronaldo ayaa la filayay inuu Martial qayb ka noqdo oo uu ugu yaraan ciyaartoyda kaydka ku jira kasoo muuqdo, hase yeeshee da’yarka Anthony Elang ayaa kusoo bilowday ciyaaarta, bandhig fiicana sameeyey.
Martial ayay ugu dambaysay inuu u ciyaaro Manchester United kulankii Arsenal ee December 2, intii ka dambaysayna waxa uu bannaanka ka joogay kooxda iyadoo uu wakiilkiisuna sheegay inuu doonayo inuu iskaga tago naadiga.
Sevilla oo lala xidhiidhinayay inuu amay amaah ku doonayso, ciyaartoygana uu doonayo inuu kasoo ciyaaro ayay Manchester United u diidday.
Sannadkii 2015 ayay Manchester United lacag gaadhaysa £58 milyan oo Gini waxay Anthony Martial kaga soo iibsatay kooxda reer France ee Monaco, waxaana qandaraskiisu uu soconayaa illaa sannadka 2024.